Office Staff - Bayint Naung (Ygn) –Male (3), Female (3) at Shwe Phon Co.,Ltd | MyJobs
Agriculture, Fishing & Forestry | $ Confidential
1. အသက် (25-35) အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
2. တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
3. ရိုးသား ကြိုးစားပြီး ကျန်းမာ သန်စွမ်းသူ ဖြစ်ရမည်။
4. ကွန်ပျူတာ Microsoft Word, Excel ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
5. Accounting အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်က ပိုကောင်းပါသည်။
6. လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
I saw this job posted on https://www.myjobs.com.mm/job/856093 and thought you might be interested in it.